သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့မှာ ဘာလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲ ~ Htet Aung Kyaw
5:16 AM Htet Aung Kyaw No comments
Friday, June 5, 2015. The Voice Daily.
လူဦးရေ ၂ ဆတုိုးလာပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ၂ ဆပုိုကျယ်မလာပါ
ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့အခမ်းအနားတွေ ကမ္ဘာ့နုိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကျင်းပ ကြသလုို မြန်မာနုိုင်ငံရဲ့မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်မှာလည်း ကျင်းပလိမ့်မယ်လုို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂက အခုလုိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သဘာဝတရားကို ကာကွယ်ရေးအတွက် စဉ်းစားမိစေဖုို့ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိုတာဟာ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် သူ့ဧရိယာက ကျယ်ဝန်းလှ ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ စစ်ပွဲတွေနဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်၊ ဓာတုဗေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြသာနာ၊ သဘာဝအရင်း အမြစ်များကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်း၊ ဂေဟစနစ်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း စသဖြင့် ကဏ္ဍစုံလှပါတယ်။
၂၀၁၅ အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ "Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care’’။ လူသားရယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရယ်၊ စီးပွါးရေးလည်ပတ်မှုတွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သဘာဝအရင်း အမြစ်အပေါ် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနုိုင်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
၁၉၈၈ ၀န်းကျင်က နားထောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုိုဘုိုဟန်သီချင်းထဲမှာ ‘’ကမ္ဘာမှာလူတွေ လူသားသန်းပေါင်း ၄ ထောင်၊ အချစ်ဆုံး တုို့နှစ်ယောက်ပါဝင်တယ်’’ ဆုိုတာ အခုစာသားပြောင်းရပါတော့မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်ကာ လအတွင်း လူဦးရေ ၂ ဆနီးပါးတုိုးလာပြီး အခု ၂၀၁၅ မှာ လူဦးရေး သန်း ၇ ထောင်ကျော်နေပါပြီ။ သက္ကရာဇ် ၂၀၅၀ ဆုိုရင် သန်း ၉ ထောင်ခွဲ အထိရှိလာမယ်လုို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။
လူဦးရေက ဒီလုို ၂ ဆတုိုးလာပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ၂ ဆ ပုိုကျယ်ဝန်းမလာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀၊ နှစ် ၁၀၀၀ က အ တုိုင်း ရှိမြဲရှိဆဲပါ။ ဒီတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ထုတ်လုပ်ပေးနုိုင်မှု ပမာဏနဲ့ တုိုးလာနေတဲ့ လူဦးရေရဲ့ စားသုံးမှု ပမာဏက မကာမိတော့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကုို အလေးထားစဉ်းစားပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကို ချွေတာသုံးကြဖုို့ ကျွမ်း ကျင်သူတွေက ဒီနေ့မှာ အထူးသတိပေး တုိုက်တွန်းနေပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် အာတိတ်စက်ဝန်းမှာရေခဲတွေ အရည်ပျော်ပြီး ပုိုလာဝက်ဝံတွေနေစရာ မရှိတော့တာ၊ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်မြင့်လာတာ၊ အုိုဇုန်းလွှာပေါက်တာ၊ ဓာတု စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေများ လာတာ၊ ဖန်လုံအိမ် အာနိ သင် ဘာ-ညာ တွေကုို သာမန်လူတွေနားလည်ဖုို့မလွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကုိုယ်ရပ်ကိုယ့်ရွာဝန်းကျင်က သစ်တော တွေ ပြုန်းသွားတာ၊ အရင်ကထက် ရာသီဥတုပုိုပူလာတာ၊ နွေမှာရေရှားပြီး မုိုးမှာရေလျှံမှုပုိုများလာတာတွေကိုတော့ မြန်မာနုိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသကလူတွေ ကောင်းကောင်းသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။
‘’ဒီနှစ်နွေက ပူလုိုက်တာ သေတော့မယ်။ ရာသီဥတုကလဲ လူတွေလုိုပဲ မမှန်တော့ဘူးလေ။ တုိုင်းပြည် အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တဲ့လူတွေ အကျင့်သီလနဲ့ပြည်စုံမှ ရာသီဥတုကမှန်မှာလေ’’ ဆုိုတဲ့ ပြောဆုိုသံတွေကုို မနှစ်နွေက ရွာပြန် ရောက်တုန်း ကျနော်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီစကားကုို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးနေကြဖြစ်ပေမဲ့ အဓိပ္ဗယ်ကိုတော့ တခါမှ အသေချာမစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပါ။
တုိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေလုိုပြောလုိုက်ရင် ရာဇပုလ္လင်ပေါ်မှာ သံလျက်ကိုင်ပြီး ထုိုင်နေတဲ့ ရာဇ၀င်ထဲက သက်ဦး ဆံပုိုင် ဘုရင်တွေကိုသာ စိတ်ထဲမြင်မိပါတယ်။ အကျင့်သီလဆုိုတဲ့စကားလုံးကုိုကြားမိရင်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားပြီး ဥပုဒ်စောင့်တာကိုသာ မျက်စိထဲမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတကြိမ်မှာတော့ လူကြီးတွေပြောနေတဲ့ မင်း ဆုိုတာ ရာဇ၀င်ထဲကလူတွေတင်မဟုတ်၊ လက်ရှိ နေပြည်တော်မှာရုံးထုိုင်နေတဲ့လူတွေလည်း အကျုံးဝင်တာပဲ။အကျင့်သီလဆုိုတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး တရားထုိုင်နေတာမဟုတ်။ အဲဒီ နေပြည်တော်ကလူတွေ လာဘ် စားတာ၊ အဂတိလုိုက်စားတာ၊ အကျင့်ပျက်နေတာတွေလဲ အကျုံးဝင်နေတာပဲလုို့ စဉ်းစားမိလာပါတယ်။
တကယ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ၀န်းကျင်အတွင်း ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၂ ဆနီးပါးတုိုးလာသလုို မြန်မာ့လူဦးရေ ကလည်း ၃ ပုံ ၁ ပုံနီးပါးတုိုးလာပါတယ်။ ၁၉၈၈ ၀န်းကျင်က သန်း ၄၀ ၀န်းကျင်သာရှိတဲ့မြန်မာ့လူဦးရေဟာ အခု ၂၀၁၅ မှာ သန်း ၆၀ နီးပါးရှိနေပါပြီ။ ဒီလုို လူဦးရေ ၃ ပုံ ၁ ပုံတုိုးလာပေမဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံအကျယ်အ၀န်းက ၃ ပုံ ၁ ပုံ ပုိုကျယ်မလာ ပါ။ ဒီတော့ တောင်တောင်တွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး မြို့ပြတွေတည်ဆောက်၊ သစ်တောတွေပြုန်း၊ ရေ၊ မြေ၊ သဘာဝ အနေအထားတွေ အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့ပေါ့။
FAO ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စုိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေအရ ၁၉၉၀ ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာ့သစ်တောဧရိယာ စတုရန်းမုိုင် ၃ သောင်းခန့်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ ၁၀ နှစ်တာ ကိုကျော်ပြီးကြည့်မယ်ဆုိုရင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရစဉ်က မြန်မာနုိုင်ငံ ဧရီယာရဲ့ ၇၀ ရာခုိုင်နှုန်းကို သစ်တောဖုံး လွှမ်းနေပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်အကျော်မှာတော့ ၄၀ ရာခုိုင်းနှုန်းသာကျန်တော့တယ်လုို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
ဒါတွေဟာ လူဦးရေတုိုးလာလုို့ သဘာဝတရားအရ သူအလုိုလုိုဖြစ်သွားတာလား။ ရှေးလူကြီးတွေပြောသလုို တုိုင်း ပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတွေ အကျင့်သီလဖောက်ပြန်လုို့လား။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Global Witness အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရဆုိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ သစ်တောတွေကနေ ခုနစ်မီနစ်မှာ သစ်ကားတစီးနှုန်း တရုတ်နုိုင်ငံထဲ ခုိုးဝင်နေပါတယ်။ တစီးမှာ ၁၅ တန်၊ ၇ မီနစ်မှာတစီးနှုန်းနဲ့ ၂၄ နာရီ ပတ်လုံးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တရက်တည်းမှာတင် တန်ချိန် ၃၀၀၀ ခန့် တရားဝင်ခုိုးထုတ်နေတဲ့ သဘောဖြစ် နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။
အခု ၂၀၁၅ မှာကော အခြေနေတွေတုိုးတက်လာပြီလား။ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပုိုင်း ရန်ကုန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ် ထုိုးပွဲလုပ်နေစဉ် ကချင်ဖက်မှာဖြစ်တဲ့တုိုက်ပွဲဟာ ‘’တရုတ်ဖက်က ၀င်လာတဲ့ သစ်ခုိုးကားတွေကို လေယဉ်နဲ့ဗုံးကျဲ တာပါ’’ ဆုိုတဲ့ပြောဆုိုချက်၊ အဲဒီမတုိုင်လေးမှာတင် တရုတ်နုိုင်ငံသားတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပါတဲ့ သစ်မှောင်ခုိုဂုိုဏ်း ဖမ်းဆီးမှု သတင်းတွေက တရုတ်နယ်စပ်ရှိ သစ်မှောင်ခုိုလုပ်ငန်း အရင်ထက်တောင် ပိုဆုိုးလာနေတယ်ဆုိုတာ သက်သေပြ နေပါတယ်။
ဒါက တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကချင်ပြည်နယ်ကအခြေနေကုို ဥပမာအဖြစ်ထောက်ပြထားတာပါ။ တခြားပြည်နယ် တုိုင်းတွေမှာလည်း ဒီလောက်အထိ အခြေအနေမဆုိုးရင်တောင် ဒီထက်သိပ်မနည်းတဲ့ ပမာဏနဲ့ သစ်တောတွေ ပြုန်းသွားတယ်ဆုိုတာ လူတုိုင်းသိနုိုင်တဲ့ အချက်တွေပါ။
ဒါဖြင့် ဘာလုပ်ကြမလဲ၊ သင်ကုိုယ်တုိုင်ကော ဘယ်လုပ်နုိုင်မလဲ
သေချာတာတော့ လုပ်နေကြအတုိုင်း ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှာ သစ်တောဝန်ကြီးအပါဝင် လူတချို့ သစ်ပင်တွေ စုိုက်ကြပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မနှစ်က ဒီနေ့မှာစုိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့သစ်ပင်တွေထဲက ဘယ်နှစ်ပင်သေပြီး ဘယ်နှစ်ပင် ဆက်လက်ရှင် သန်နေသလဲ။ စုိုက်တဲ့ပင်၊ ဆက်လက်ရှင်သန်တဲ့ပင်နဲ့ ခုတ်တဲ့အပင်ကြား အရေအတွက် ကာမိရဲ့လား၊ သစ်ခုတ်မှု တွေကို တကယ်ပဲ တားဆီးနုိုင်ပြီလား ဆုိုတာတွေကတော့ မေးခွန်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေဆဲပါ။
ထူးခြားတာကတော့ မြန်မာ့နုိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဖက်မှာဆောင်ရွက်နေသူအများစုဟာ သစ် တောအရာရှိဟောင်းတွေဖြစ်နေခြင်းပါ။ ဒါ အစိုးရဖက်မှာတင်မဟုတ်၊ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင် တွဖက်မှာ လည်း အတူတူပါပဲ။ ‘’သစ်ပင်တွေရောင်းစားလုို့ကုန်သွားတော့ သစ်တောအရာရှိတွေလဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်း သိမ်းရေးအရာရှိအဖြစ် ဆုိုင်းဘုတ်ပြောင်းလုိုက်တာပေါ့’’ ဆုိုတဲ့စကားဟာ နယ်စပ်က သစ်တောနဲ့နီးစပ်သူတွေကြား လူသိများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်ဖြစ် တနှစ်မှာ တရက်တာသစ်ပင်စုိုက်ခြင်းက ၃၆၅ ရက်စလုံး မနားတန်း ခုတ် နေတာနဲ့စာရင် ကြိုဆုိုသင့်ပါတယ်။
ဒါက ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးနဲ့ဆုိုင်တဲ့ သစ်တောသစ်ပင်ကိစ္စ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းလှပဖုို့ တခြားကော ဘာတွေလုပ်နုိုင်ဦးမလဲ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးချရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကုို ညစ်ထေးမှုမဖြစ်အောင် စနစ်တကျ နေထုိုင်ရေးတွေကလည်း အရေကြီးမယ်ထင်ပါတယ်။
သစ်ခုတ်သမားတွေ ၃၆၅ ရက်မှာ တရက်နားပြီး သစ်ပင်စုိုက်ကြသလုို လမ်းဘေး ကွမ်းသွေးထွေးသူတွေ တရက်တာ ကွမ်းသွေးကုို တွေ့တဲ့နေရာမှာမထွေးပဲနဲ့ သတ်မှတ်နေရာမှာ စနစ်တကျ ထွေးခြင်းအားဖြင့် သဘာဝပတ်ကျင် မညစ်ထေးမှုကို လျော့ချနုိုင်မလား။ လမ်းဘေးအမှိုက်ပစ်သူတွေ၊ အိမ်နောက်ဖေး လမ်းကြားထဲအမှိုက်ပစ်သူတွေ ဒီနေ့မှာ အဲဒီလုိုမပစ်ပဲ စုပေါင်းအမှိုက်ကောက်တာကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းလာအောင် ကူညီပေးနုိုင်မလား။
ဒါက လူတုိုင်းလုပ်နုိုင်တဲ့ကိစ္စ။ ဒါပေမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆုိုတာ တနှစ်မှာ တရက်လုပ်ရုံနဲ့ ဘယ် ရပါ့မလဲ။ စနစ်တကျနဲ့ရေရှည်လုပ်နုိုင်မှ၊ မျိုးဆက်အလုိုက် လုပ်နုိုင်မှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာပါ။ ဒီအတွက် လူ ငယ်တွေရှိတဲ့ စာသခန်းတွေဆီ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးဟာ ဘာသာရပ်တခုအနေနဲ့ ရောက်လာသင့်ပါ တယ်။ ကျောင်းသားဘ၀မှာကတည်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း စနစ်တကျ ပညာပေးသင့်ပါတယ်။
အဲဒီလုိုအဆင့်ဆင့်ဖြစ်လာစေဖုို့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုို စီမံခန့်ခွဲပုိုင်ခွင့်ရှိသူတွေ၊ တုိုင်းပြည်ကုို စီမံခန့်ခွဲပုိုင် ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးကြီးလာပါတယ်။ ရှေ့ပုိုင်းမှာလူကြီးသူမတွေပြောခဲ့တဲ့ အတုိုင်း တုိုင်းပြည်အုပ် ချုပ် မင်းလုပ်တဲ့လူတွေ အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံဖုို့လုိုပါတယ်။ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖုို့ ရေရှည်အမြင် လုိုလာနေပါတယ်။ ။